Safarkii madaxweynaha ee magaalada Jowhar oo dib u dhac ku yimid – STAR FM SOMALIA
Safarkii madaxweynaha ee magaalada Jowhar oo dib u dhac ku yimid
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa xaqiijisay inuu baaqday Safar maanta lagu waday in Madaxweyne Xasan Sheekh ku tago magaalada Jowhar, halkaasoo uu ka socdo shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Sida ay sheegayaan wararka Madaxweynaha ayaa safarkiisa Jowhar waxaa ku wehlin lahaa qaar ka mid ah Madaxda maamul goboleedyada dalka.
Lama shaacin xilliga uu aadi doono, waxaase loo sababeynayaa dib u dhaca ku yimid safarkiisa ay tahay in madaxweynaha uu aad u daalan yahay kadib diyaargarowgii shirkii shalay lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay hogaamiyaasha dalalka ku bahoobay urur goboleedka IGAD.
Magaalada Jowhar ayaa saaka ammaanka la adkeeyay, iyadoo la xirey waddooyinka muhiimka ah, Ciidamo isugu jira kuwo Booliska, nabadsugida iyo kuwa Milatariga ayaa la dhigay waddooyinka magaalada Jowhar.
Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sh/dhexe iyo kan degmada Jowhar iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ku sugnaa saacado garoonka kubbada ee Shongole Stadium oo ahayd halkii lagu waday in uu ka soo dagaan Wafdiga madaxweynaha Soomaaliya uu horkacayay.
Sidoo kale hoolka shirka maamul u sameynta labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan oo uu horaantii bishii Janaayo ee sanadkan uu Madaxweyne Xasan Sheekh si rasmi ah uga furay shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe ayaa waxaa ku sugnaa ergada ka qeybgalaysay shirka.
Siyaasiyiin ku dhowaaqday inay yihiin musharixiinta xilka Madaxweyne ee Maamulka Hiiraan iyo Sh/Dhexe iyo siyaasiyiin kale oo la hadal hayo in ay doonayaan in ay xilalka sarsare ka qabtaan ayaa ka mid ahaa dadkii saacado ku sugnaa hoolka shirarka.
Guddoomiyaha gobolka Sh/dhexe Cali Cabdualahi Xuseen ayaa ugu dambeyntii shirka kaga dhawaaqay inuu baaqday safarkii Madaxweynaha waxana uu u mahadceliyay dadkii doonayay in ay soo dhoweeyaan iyo ergadii shirka ee ka qeybgalaysay shirka maamul u sameynta labada gobol Sh/dhexe iyo Hiiraan.
Dhowaan ayaa sarkaal ka tirsan wasaarada arrimaha gudaha waxa uu ku dhowaaqay in shirka maamul u sameynta labada gobol Hiiraan iyo Sh/dhexe inuu si rasmi ah u furmay.
Afhayeenka Ciidamada Dowladda ee Gobolka Gedo oo Faah Faahin Ka Bixiyay Dagaalkii Degmada Ceelwaaq
Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo lagu daray Liiska 135-ta ee Odayaasha Dhaqanka